छालामा बोटक्स उपचार « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
२०७६, ८ माघ बुधबार १५:३१ मा प्रकाशित
डा.जेबिना लामा /कस्मेटिक डर्माटोलोजिष्ट
वोटक्स उपचारको प्रयोग आजकल निकै लोकप्रीय भएको छ । पाँच वर्षअघि अलि उमेर भएका व्यक्तिहरु बोटक्स उपचार गर्न आउने गरेकोमा अहिले २५ देखि ३० वर्षका महिला पुरुष दुवै अत्यधिक यो सेवा लिन आउने गरेका छन् ।
यो बिना शल्यक्रिया सुईको माध्यमबाट गरिने उपचार हो । बोटक्स उपचारमा ब्याक्टेरियाको प्रोटिनबाट निकालिएको औषधि इन्जेक्सनको माध्यमबाट सम्बन्धित भागमा प्रयोग गरिन्छ । यसले मांशपेशीलाई आराम गरिदिन्छ र छाला चिल्लो बनाउँछ । यसको प्रयोगले चाउरी परेको छाला तन्काउने भएकाले उमेरदार व्यक्तिलाई जवान देखाउन मद्धत गर्छ । बोटक्स उपचार मेडिकल र एस्थेटिक (सौन्दर्य) सुधार दुवैमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
बोटक्सले एक सेन्टिमिटरको परिधिभित्र काम गर्ने भएकाले मांशपेशीको सक्रियताको आधारमा कसैलाई थोरै त कसैलाई धेरै युनिट बोटक्सको जरुरत पर्नसक्छ । व्यक्तिको अवस्था अनुसार १५ देखि ५० युनिटसम्म बोटक्स लाग्न सक्छ । यसको मूल्य प्रति युनिट ५ सय देखि ६ सय रुपियाँ पर्छ ।
माइग्रेनका कारण हुने टाउको दुखाई, हाइपरएक्टिभ ब्लाडर (छिनछिनमा पिसाब लागि रहने), आँखा झिमझिमाउने रोग, रातको समयमा दाँत किट्ने समस्या जसले दाँत खिइँदै गएको समाधानका लागि पनि बोटक्स उपचार गरिन्छ । यसैगरी काखी, हत्केला, पैतालामा आवश्यक भन्दा बढी पसिना आउने समस्या नियन्त्रणका लागि बोटक्सको प्रयोग गरिन्छ । दुर्घटनामा मसल्स, स्पाइनल कर्डमा चोट लगेर मांशपेशी इन्भोलुन्टरी मुभ (हल्लिरहने) जस्ता समस्यालाई पनि बोटक्स उपचारले नियन्त्रणमा राख्न मद्धत गर्छ ।
अनुहारको चारीपना समस्या समाधानका लागि बोटक्स उपचार विश्वव्यापी रुपमा एन्टि रिंकल इन्जेक्सन हो । निधार, आँखी भुर्इँको बीच भाग, हाँस्दाखेरि देखिने आँखा वरिपरीको चाउरीपन, नाक खुम्च्याउँदा हुने चाउरिपना आदिमा बोटक्स उपचार गरिन्छ । यसका साथै अण्डा आकारको अनुहारको सेप बनाउन, मोटो घाँटीलाई सानो बनाउन, अनुहारको पोर्सको साइज सानो बनाउन बोटक्स उपचार प्रयोग गरिन्छ ।
एकपटकको बोटक्स उपचारले कति समयसम्म धान्छ ?
चाउरीपना हटाउन गरिएको बोटक्स उपचारको आयु करिब ४ देखि ६ महिनासम्म हुन्छ । ज लाइन स्लिमिङका लागि करिब ६ देखि १२, घाँटी सुरिलो बनाउन करिब ४ देखि ६, पोर्सका लागि करिब २ देखि ३ महिना काम गर्छ । धेरै पसिना आउने समस्यामा करिब ६ महिनाको फरकमा उपचार गर्नुपर्छ । माइग्रेनका लागि करिब ६ महिनाको फरकमा उपचार गर्नुपर्छ । तर कसको मांशपेशी कति सक्रिय छ भन्ने आधारमा बोटक्स उपचारको आयु निर्भर हुन्छ ।
बोटक्स कहिलेदेखि प्रयोग गर्ने ?
प्राय ३० वर्षमुनिका व्यक्तिहरुमा टेम्पोररी चाउरीपना हुने र पछि त्यो पर्मानेन्टमा परिणत हुनसक्ने भएकाले चाउरीपना टेम्पोररी हुँदादेखि नै बोटक्स उपचार प्रयोग गर्दा राम्रो मानिन्छ । पर्मानेन्ट भएपछि बोटक्सले राम्रोसँग काम नगर्नसक्छ ।
यसले साइड इफेक्ट पो गर्ने हो कि ?
बोटक्स छालामा नभई मांसपेशीमा लगाउने भएकाले मांशपेशीको एक्टिभिटी र चाउरीपनाको प्रकारहरु थाहा पाउन जरुरी हुन्छ ।
कहिलेकाँही बोटक्स उपचार गरेको भागमा निलो दाग देखिनसक्छ । तर यो दुई देखि तीन दिनमा आफैं हराएर जान्छ । लामो समयसम्म कुनै पनि साइड इफेक्ट हुँदैन । यसलाई हाम्रो शरीरले नै पचाउँछ ।
कस्ता व्यक्तिले बोटक्स प्रयोग गर्न हुँदैन ?
न्युरो मस्कुलर डिस्अर्डर (पार्किन्सन्स), फेसियल प्यारालाईसिस भएका व्यक्तिलाई बोटक्स उपचार प्रयोग गर्न हुँदैन । यसबाहेक मधुमेह, उच्चरक्तचाप, थायराईड डिस्अर्डर भएका व्यक्तिहरुले बिना साइड इफेक्ट ढुक्क भएर यो उपचार सेवा लिन सकिन्छ ।
(डा. जेबिना नक्सालस्थित द स्किन क्लिनिकको मेडिकल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ ।)
असार महिना बित्यो श्रावण भयो सुरु ।लगाइ धान बालि अब आउला लुतो बरु ।। मनाउथे
जनस्वास्थ्य सरकोर, काठमाडौं । होलीमा मानिसहरूले एक अर्कामाथि विभिन्न प्रकारका रङ्गहरू दलेर रंगिन बन्छन्। रङ